Best Pillow Bag gusset Bag Vetikal mbukota Machine Manufacturer na Supplier | AHO
Ohiri Isi Bag Gusset Bag Vetikal mbukota Machine
ertical nkwakọ igwe kwesịrị ekwesị iji mee akpa malite a ewepụghị foil ukwu, jikọtara na volumetric dosers, auger dịanyā, linear na multihead.
Design maka obere ngwugwu
Mee Ohiri Isi akpa, Gusseted akpa
Usoro GVF nke igwe igwe nkwonkwo GAOGE ga-abụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge. You'll ga-enwe ike ịza ngwa ngwa na mgbanwe na-agbanwe agbanwe na ihe ịma aka nke ahịa ahụ maka ntụgharị ya, oke ọsọ na ike ịmepụta karịa ụdị akpa.
Vetikal nkwakọ igwe kwesịrị ekwesị na-eme akpa na-amalite site a ewepụghị foil ukwu, jikọtara na volumetric dosers, auger filler, linear na multihead.
Vetikal nkwakọ igwe kwesịrị ekwesị ime akpa na-amalite site a ewepụghị foil ukwu, jikọtara na volumetric dosers na kemeghi telescopic iko na flaapu. Kwesịrị iji ngwaahịa ngwaahịa (nri, obere pasta, mkpo, osikapa, mkpụrụ osisi mịrị amị, candies, ọka, nri anụ ụlọ, wdg)
Ọka agbara agba,
Nchịkọta kachasị mma nke usoro igwe na ikuku na isi igwe nke igwe na-enyere nsonaazụ zuru oke na obere ume na ikuku ikuku.
Iji Volumetric na njuputa usoro nke igwe na-enyere gị aka ịkọwapụta nke ọma.
Ime njikwa dị ka akpa ogologo na ukpụhọde, photocell remote, okpomọkụ na ndochi oge, .etc. Ezubere n'ụzọ dị mfe ịnweta njikwa njikwa.
A rụọ ọrụ igwe ahụ site na iji usoro PLC na ihu mmetụ.
Kwekọrọ n'Ozizi na dị iche iche ndochi usoro.
Mfe na ọrụ enyi na enyi igwe.
Obere mmezi na ụgwọ ọrụ dị ala.
Barcode na ngafe ụbọchị ebipụta ngwa
Ngosipụta nke ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ okpomọkụ nke ikpuchi akara
Nke gara aga: Fdị VFFS Vetikal Na-ejuputa na Ngwa Nkwakọ ngwaahịa
Osote: Automatic gusset akpa mbukota Machine
Ofụri Esịt Automatic Doypack Guzosie Up obere akpa Zip Bag ...
Protein Powder Packaging igwe
Automatic Doypack Guzosie Up obere akpa Zip Bag Salt P ...
Akpaaka Sachet Cocoa Powder Packaging Machine
Automatic obere akpa jupụta Ma Akara Machine N'ihi Powde ...
Akpa na Carton Intermittent Motion Case Packer